बारम्बार पिसाब लाग्ने र सम्भाेगपछि पीडा भएर वीर्य खस्ने त गर्दैन ? – Everest Dainik – News from Nepal
बारम्बार पिसाब लाग्ने र सम्भाेगपछि पीडा भएर वीर्य खस्ने त गर्दैन ?
कतिपय पुरुषमा याैनसम्बन्धकाे बेला वीर्य खस्दा पीडा हुने गर्दछ । कतिपयमा भने वीर्य खसेपछि लिंगकाे दायाँ या बायाँ दुख्ने समस्या देखिन्छ । सामान्य जस्झाे लागेपनि यस्ता समस्या गम्भीर राेगकाे लक्षण हुन सक्छन् । यस्तै एउटा एउटा समस्या हाे प्राेष्टेट बढनु ।
प्राेष्टेट ग्रन्थि बढने कैयन कारण छन् । एउटा तथ्यांकअनुसार, ३० प्रतिशत पुरुषमा ५० वर्ष टेकेपछि र ५० प्रतिशत पुरुषमा ६० वर्ष टेकेपछि याे ग्रन्थी बढ्ने समस्या देखापर्दछ ।
प्राेस्टेट ग्रन्थीलाइ पुरुषकाे दाेश्राे मुटु भनिन्छ । वीर्य उत्पादन र मुत्र निस्कासन जस्ताे महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने याे ग्रन्थी उमेर बढ्दै जाँँद बढ्दै गएर मुत्र नलीलाइ साँघुराे बनाउँदै लैजान्छ र समस्या बढाउँदै लैजान्छ । याे ग्रन्थी अाफै बढ्नु राम्राे हैन र याे बढ्ने प्रक्रियालाइ अाधुनिक चिकित्सा विज्ञानमा बिनिग्न प्राेस्टेट हाइपरप्लेसिया(BPH) भनिन्छ ।
१. पिसाब फेर्दा अप्ठेराे महसुस हुनु
२. बारम्बार पिसाब लाग्नु तर ननिथ्रनु
३. पिसाबकाे धाराे पातलाे हुनु
४. पिसाब ननिथ्रनाले पिसाब थैलीमा बाँकी पिसाबमा सङ्क्रमण भइ पिसाब फेर्दा पीडामहसुस हुनु
५.पिसाबले च्यापेकाे भान हुनु तर पिसाब फेर्दा पिसाब नअाउनु
६. पिसाब गरिसके पछि पनी पिसाब चुहिरहनु
७. अण्डकाेष दुख्नु
८. सम्भाेगकालमा पीडासाथ वीर्य स्खलित हुनु ।
१. सरिफाकाे बियाँ
यसमा प्रशस्त मात्रामा पाेषक तत्वहरु जस्तै अाइरन, फस्फाेरस, ट्रिप्टाेफेन कपर म्याग्नेसियम म्याग्निज भिटामिन के, प्राेटिन, फेट्टी एसिड र फाइटाेस्टेराेल प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । जुन जिङ्ककाे राम्राे श्राेत हाे । प्रत्येक दिन ६० मिलिग्राम जिङ्ककाे सेवन प्राेस्टेट राेगीहरुकालागी फाइदाजनक हुन्छ । साथै सरिफाकाे बियाँमा बिटा स्टिस्टेराेन पाइने भएकाले यसले टेस्टाेस्टेराेनलाइ डिहाइड्राेस्टेस्टाेराेनमा परिणत हुन दिदैन । जसले गर्दा ग्रन्थी बढ्ने क्रमलाइ नियन्त्रित गर्दछ ।
याे बियाँ काँचै वा भुटेर अन्य गेडागुडीसँग मिसाएर खान सकिन्छ । यस बाहेक नियमित खानासँग वा दालमा मिसाएर पनि खान सकिन्छ । प्रत्येक दिन १० ग्राम सरिफाकाे बियाँ लगातार एक महिना खाने गरेनाले प्राेस्टेटबाट राहत पाइन्छ ।
२० ग्राम अालसकाे धुलाे मनताताे पानीसँग नियमित एक महिना सम्म खानाले प्राेस्टेटमा राहत हुन्छ । अालस अाफै गर्मी भएकाले गर्मी माैसममा भने ज्१० ग्राम भन्दा बढी नलिनु राम्राे । र अालसकाे धुलाे सेवन गर्दा ताजा नै बेस ।
एउटा हर्राे राती पानीमा डुबाएर छाडिदिने । १२ घण्टा पछि बियाँ निकालेर हर्राे राम्ररी चबाएर हर्राे डुबाएर राखेकाे पानीसँग निल्ने ।
५ ग्राम गाेखुर मनताताे पानीसँग १ महिनासम्म सेवन गर्नाले पनि प्राेस्टेटमा राहत पुग्दछ ।
यी अाैषधि सेवन गरेकाे एक घण्टा अगाडी वा पछाडी सम्म कुनै पनि कुरा खाने वा पिउने गर्नु हुँदैन ।
यस्ता विरामीले रहर मुसुराे काबुली चना सख्खर राताे खाेर्सानी मिठाइ तेल अमिला अचार र मसलाकाे प्रयाेग नगर्ने र अाैषधी सेवन अवधि भरी सम्भाेग र व्यायाम बन्द गर्ने ।
ट्याग्स: प्राेष्टेट ग्रन्थी